Isifundo sendlela yokufaka i-WepCrack ku-Linux Mint 13 | Kusuka kuLinux
Isifundo sendlela yokufaka i-WepCrack ku-Linux Mint 13
Lokhu engikuthumele okokuqala futhi ngikulethela lesi sifundo sendlela yokufaka nokusebenzisa leli thuluzi elibizwa I-WepCrack, isiphetho sangaphambili se- i-aircrack-ng.
Kungenzeka ukuthi le ndatshana ayithandi abaningi, ngoba ukuphela kwaleli thuluzi kungathathwa njengento engekho emthethweni. Wonke umuntu ukhululekile ukwenza lokho akuqondayo
Ngizochaza ukuthi lolu hlelo lumayelana nani ngamagama ami:
Abaningi bangasho I-WepCrack Kungenxa yokusetshenziswa okungekho emthethweni noma okungalungile ngenxa yokuthi ulenga kwamanye amanethiwekhi okungewona awakho, ngoba iqiniso liwukuthi uma kunesizathu.
Kepha kungenzekani uma ngasizathu simbe ungakwazi ukukhokha isikweletu se-inthanethi bese beyinqamula? Akukenzekanga kubo bonke, uzosala ungaphequluli izinsuku ezimbalwa uze ukhokhe isikweletu bese beqala kabusha i-Intanethi, futhi ngikholwe ukuthi kulukhuni namuhla ukungabi nale nsizakalo.
Ingabe yingakho uzokweba i-Intanethi kamakhelwane wakho? Yebo, noma ngabe sikubona "kungalungile" ungazibona usesidingo sokwenza. Uma umakhelwane wakho ehlakaniphile, vikela i-WiFi 🙂 yakhe
I-WepCrack ilandelwe kwikhompyutha yethu.
Okokuqala silanda uhlelo:
Silifuna kufolda yethu yokulanda bese uchofoza kabili iphakheji yethu:
Ukufakwa kwephakeji ngalinye.
Manje sizoqhubeka ukufaka amaphakheji ngamunye eza kithi, angama-4 futhi amakwe ngechashazi elibomvu. Sichofoza kabili ngamunye ngamunye futhi ngethemba ukuthi bayafaka, ngakho-ke sizokwenza nawo wonke umuntu.
I-WepCrack ifakiwe nakumenyu yethu.
Njengoba ukwazi ukubona ngemuva kokulandela izinyathelo zangaphambilini sesivele sineWepCrack yethu efakwe kwiLinux yethu futhi yafakwa kwimenyu njengoba isithombe sisho.
Njengoba sesivele sinayo kwiLinux yethu sizoyikhipha futhi iwindi lokuqala elingaveli yileli elisikhombisa amanethiwekhi asitholayo, ngalokhu sikhetha inethiwekhi bese siyachofoza kabili.
QAPHELA: Ukwazi ukuthi sihamba kahle ngenqubo engezansi kwesobunxele sibona okuhle (x) lapho i- (x) inyamalala kungenxa yokuthi singalandela isinyathelo esilandelayo.
Ngemuva kokukhetha inethiwekhi sichofoza ku- "Ukugunyaza"
Manje siya lapho ithi "Attack" bese uchofoza ku- "Start Attack".
Sesicishe saqeda sidinga nje ukuchofoza ku- "Start Crack" bese silinda kuze kube yilapho KEY ingabonakali.
KULUNGILE !! Njengoba ukwazi ukubona, isivele isibonisa ISIQINISEKISO senethiwekhi esiyikhethayo futhi lokhu kungaba inqubo yonke yalapho singavala uhlelo noma uma befuna bangaqhubeka namanye amanethiwekhi kodwa lokho kungumuntu wonke.
Uma uvula i-Wepcrack inethiwekhi yakho izonqamuka ngokuzenzakalela.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko » Isifundo sendlela yokufaka i-WepCrack ku-Linux Mint 13
Ukuzama ukucasula okuncane ngangokunokwenzeka:
Ngokombono wami othobekile, le ndatshana ayifundiswanga nakancane, ichaza nje ukuthi uchofoza kanjani kwi-.deb, nokuthi "ungantshontsha" kanjani i-Wi-Fi kumakhelwane wakho, (wonke umuntu uyazi ukuthi benzani nokuthi yiziphi izimilo zabo khombisa, ikakhulukazi Kubaluleke kangako kimi, kepha njengombhali wale ndatshana awukwazi ukubeka «Yebo, noma ngabe siyibona“ kabi ”ungazibona usesidingo sokwenza lokho»). Ngicabanga ukuthi uma ukhulume kancane kakhulu nge-aircrack-ng, noma ngenhloso yangempela yethuluzi, kungakunika okuqukethwe okwengeziwe. Ngakolunye uhlangothi kunamaphutha amaningi opelomagama kanye nohlelo.
Angijwayele ukubhala imibono uma ngingenanto enhle engingayisho, kepha ngibona sengathi ikhwalithi yezihloko ibalulekile.
Ngicabanga ukuthi nguwe omuhle ngakho ngikuvumela ukuthi wenze isihloko ok
Kunama-lammers amaningi namathuluzi athakazelisayo, njenge-fern-wifi-cracker, lokhu kungeza ukuxhaswa ekuhlaseleni i-wps, i-wpa2, nokudunwa kweseshini, ukuthola isikhundla ebalazweni lenethiwekhi ehlaselwe, njll.
Uma othile evikela i-wifi yakhe nge-WEP kufanele ifohlwe, isikhathi!
I-wifi yami esikhathini esedlule bekufanele ngiyishiye newebhu, ngaphandle kwalokho ama-wifi adapters ami ku-linux azonqamuka ngemuva kwemizuzu engama-30 ngisebenzisa i-wpa.
Faka isendlalelo esingeziwe sokuphepha, faka ukuhlunga ikheli le-MAC bese unika amakheli e-static IP futhi yilokho kuphela.
Okuthunyelwe okuhle, njengoba abaningi bekhungatheka ngokusebenzisa ikhonsoli. Iqiniso ukuthi kuyasebenza impela uma ungafuni ukusebenzisa i-CD ebukhoma ye-Backtrack yalowo msebenzi, kepha ngamunye ubhekene nezenzo zabo.
Ngokuphathelene nokwebiwa kwe-Wi-Fi, ngisebenzisa i-WPA2, isihlungi sekheli le-MAC nokusetshenziswa kwe-static IP, ngakho-ke ngazama nge-Beini (insiza ye-Live CD yokweba i-Wi-Fi) futhi ayikwazanga ukwenza lutho.
UJuan Pablo Jaramillo kusho
Akunjalo impela, amanye ama-ISPs eColombia ashiya indawo yokungena ngokubethela kwe-WEP ngokuzenzakalela ngaphandle kokuthi ukwazi ukwenza noma yini ukuyiguqula, ngakho-ke ubiza ukwesekwa ukuze ishintshe, njengoba kunjalo kimi. Yini okufanele ngiyenze? Isikripthi  sokuqinisekisa ukuthi akukho mfokazi eduze kwenethiwekhi yami.
Phendula uJuan Pablo Jaramillo
Ukususa amazwana ngaphandle kokuvikela ngisho nokuvumelana nami, kodwa-ke….
Kungakho ngihlala ngisebenzisa ikhebula noma ama-plc wami futhi ngicindezela omakhelwane. Ngenkathi ngingenayo i-intanethi ekhaya, uyazi ukuthi ngenzeni? khokha i-skewer yaleyo 3g ne-voila. Sekwanele i-chorizar xD
Kepha dedela i-wifi ukuxhuma wenze i-mitm… .. kumnandi kakhulu lokho!
inyoni emnyama kusho
Kubonakala kimi okuthunyelwe, okufanele kususwe Ngokubona kwami ​​akukho emthethweni ngokuphelele ukukhangisa "lolu hlobo lwethuluzi."
Phendula inyoni emnyama
Ngishiya isinali livulekile ngama-mac addres ahlungiwe ukuze i-router ivumele kuphela amakhompyutha engiwakhethe phambilini ukuthi axhumeke, okwamanje omakhelwane badlala abayizimungulu.
Kuyafana !! i-wpa2 nokuhlunga nge-mac, kuyibhadi ukubeka eyodwa ngakunye, kepha manje njengoba amafoni ane-wifi eningi, kepha kusengcono kakhulu.
Futhi lo mbhalo "uhlulekile", kwanele ukusho ukuthi inhloso yawo bekuwukucwaningwa kwamabhuku. Ngemuva kokuthi ngamunye enze enye inkinga. Kepha kubonakala sengathi noma ngubani obhala uhlelo olufana nalolu, into yokuqala engicabanga ngayo ukweba kumakhelwane wakhe (impela inja kamakhelwane yayishaya indlela hehe).
Nge-kismet ne-macchanger usuvele uphukile. XD
Kuliqiniso, futhi awusindiswanga ekuqhekekeni noma ngabe usebenzisa i-WPA2 / AES, yize ungqimba lokuphepha olunikezwe ukuhlunga kwe-MAC ne-WPA2 / AES futhi kugcina izingane eziningi zeskripthi kude.
Okufanayo kubonakala ngokushesha okukhulu uma untshontsha i-wifi yakho ..., ikakhulukazi ngejubane lokulanda le-XD.
Lokho kuyiqiniso ngokuphelele.
Lokhu KULUNGILE? Uma ngibhalisa ngithola ukuphawula okwenziwe abasebenzisi nokuthi omengameli bayakususa, ingabe kulungile ukuthi kusebenze kanjena?
Isizathu sokusebenzisa lokhu kubonakala sengathi siyisiphukuphuku kimi ngoba banqamule i-inthanethi yakho futhi akudingeki ukuthi uyikhokhele, ngakho-ke uthathe, ngaphandle kwemvume, isignali yomakhelwane.
Njengoba kulula njengezinto ezi-2:
1.- Yethula i-athikili nokusetshenziswa kohlelo ukuhlola ukuphepha kwenethiwekhi.
2.- Cela kumakhelwane imvume yokusebenzisa isignali yabo bese uzama ukuhamba ngendlela ejwayelekile ngaphandle kokwenza ukulanda okudonsa umkhawulokudonsa.
Yebo, ungasebenzisi nje, isikhathi.
Uma kungukuthi i-wpe deciphers kuphela, ayikubeki kanjalo, isebenza kakhulu ukusenza sazi ukuthi singazivikele kangakanani kunokusebenzisa izinhloso ezimbi.
Ngicabanga ukuthi le ncwadi akufanele ibe khona ngoba imayelana nezihloko ezingekho emthethweni nezijezisiwe,
Angisho ukuthi abakwenzi kodwa ukuthi le bhulogi akufanele iyishicilele, ngayinye ikhululekile kodwa ngicabanga ukuthi kunezinye izinkundla namabhulogi athile ayo.
Uma uzobeka okuthunyelwe kanjena, faka okungenani "Anginacala" "ukuze babheke ukuphepha kwabo"….
Njengoba ngishilo ngaphambili, uma ungayithandi noma ungayithandi, ungayisebenzisi, period.
Ake sibone ukuthi manje ngeke yini sikwazi ukukhokha uxhumano olubi lwe-intanethi ye-unirmalita kakhulu, sizohambahamba sizungeze indlu, kodwa-ke uma, ngokunye okubi sivele sinokuningi futhi ngaphezu kwakho akunakho ubuhlungu ukuchitha kuso. Masingabi yi-HYPOCRITE, futhi singafundisi kangako njengo- "Barcenas" nezindatshana ezisezingeni eliphezulu nezemfundo, hhayi ngalowo mqondo.
Ngicabanga ukuthi lolu hlobo lokuthunyelwe luqinisa kuphela uhlobo olucatshangwayo abasebenzisi be-GNU / Linux abalusebenzisa kuphela ngoba lumahhala.
Ake sibone .. Kungani unganikeli izixazululo zenkinga njengakwimibono eminingi engenhla esikhundleni sokugxeka uma ngabe okuthunyelwe kukubi, kuhle, noma kuyichilo? Kungani singasho ukuthi yini esingayenza ukuzivikela?
Sibuyela esibonelweni sommese: Ukuthi uwuthengiselwe wena esitolo akusho ukuthi kufanele uwuthengele ukubulala umuntu.
Ukweba kubi, akufanele kwenziwe, kepha ithuluzi likhona, lisezinqolobaneni, futhi okuthunyelwe okufana nalokhu kuzama ukufundisa ukuthi kusetshenziswa kanjani. Ukuthi siyayisebenzisa noma cha kuhlala kunembeza wethu.
Futhi bantu bami: Ongenasono waphonsa itshe lokuqala.
Ngicabanga ukuthi ukuphawula kwami ​​bekungaqondakali kahle, ngiyacacisa ukuthi angikhathali kangako ngodaba lokuziphatha kombuzo, okungikhathazayo yindlela yokusondela endabeni, futhi ubuhlanya be-athikili abukho ezingeni lokuthi umsebenzisi ovela ku-linux engingalindela.
Kuyindatshana yesithangami seWindos, somsebenzisi ofuna ukucindezela ngokulandelayo, ngokulandelayo, ngokulandelayo, futhi athole ukudlula, ngaphandle kokufunda noma yini.
Futhi uzuzani ngokusho konke lokhu? Uma ungasithandi isihloko, ungahamba kalula kanjalo
Uma ubhala ngendlela engaqondakali njengoba usanda kwenza, khona-ke uyaqonda ukuthi kungani kunezinhlobo zezinkinga.
Eqinisweni, ngabe ubhale isihloko sakho ngokuthi "Hlola ukuphepha kwenethiwekhi yakho engenantambo ngeWepCrack kuLinux Mint 13", futhi ngaleyo ndlela ubungagwema izikhalazo ezinjalo ezingadingekile (futhi ngisho lokhu ngokwami).
uqinisile kepha lowo elula ongathandi ukuthi iposi lihambe
Ngicabanga ukuthi okuthunyelwe nokuthi babekade bephawule kanjani ngaphambi kokuba amathuluzi abekhona, nokuthi wonke umuntu uwasebenzisa ngokuthanda kwabo kanye nolwazi, ukuthi wonke umuntu uyakusebenzisa njengoba efuna ukukusebenzisa futhi ngikholelwa ukuthi izinga lomsebenzisi we-Linux liqukethe kuphela yokukhuthazwa ukwenza ushintsho noma angazi ukuthi yiliphi izinga engizolidinga ukulisebenzisa ……. ungangitshela ukuthi ngenzeni ???? …………. Yebo, noma ungangitshela, njengohlelo engilusebenzisayo, NGIMAHHALA !!!!!
Ngiyakhathala ngodaba lokuziphatha lodaba, ukweba akukubi kuphela, kuyicala.
Kuyinto eyodwa ukubika ukuthi leli thuluzi likhona, futhi kungenye into ukufundisa ukuthi ungayifaka kanjani nokuthi uyisebenzisa kanjani. Ngokuphambene nalokho, okuthunyelwe okwamukelekayo ngokokuziphatha, okufanele kwaziswe ukuthi ungazivikela kanjani kulelo "thuluzi". Yingakho isibonelo sommese singangisebenzeli, kuba sengathi umthengisi wommese othi «ummese» ukufundise ukusika umphimbo womuntu kahle wakutshela, ngoba uma ubulala umuntu kukuwe. Ngiyaphinda ngiyasho ukuthi lokhu okuthunyelwe kufanele kususwe.
Yebo, wonke umuntu unemibono yakhe futhi ngiyayihlonipha eyakho 😉
Yebo, ngokulandela icala lommese, banginike isikhali futhi bangifundise ukusisebenzisa kahle, ukuze ilitshe lingaphuthelwa. Ngitshele, lokho kungenza umuntu oyingozi, ngiyakungabaza impela, mngani.
Lokhu okushiwo ngu- @elav kunesisindo sakho, futhi okushilo nakho kunakho (ukweba kubi, kuyicala, ukuqhekeza iWifi yangakini, ngakho-ke futhi kuyicala), kepha iqiniso lokuthi Kuthunyelwe lesi sihloko ngendlela okwenziwe ngayo , akusona neze isizathu sokukhomba noma ngubani ngomunwe bese sithi bayaphanga amasela. Njengoba kushiwo ngaphambili, ngubani okhululekile esonweni, phonsa itshe lokuqala, ngoba ake ungitshele, ngubani empilweni yakhe ongakaze, kodwa NGEKE asebenzise uhlelo lwezigebengu, noma umdlalo? ... Ngiyacela, isimilo esingadingekile singasigcina. kugadwe kahle.
Ngiyakuhlonipha okushiwo ngu-Elav, wonke umuntu unombono wakhe futhi owami ucace bha.
Ukukhangisa uhlelo olusetshenziselwa ukwenza ubugebengu kubonakala kimi kuwumkhuba omubi we- "From Linux", futhi lokho kuyangikhathaza ngoba ngiyayithanda le bhulogi, futhi ngicabanga ukuthi ingathinta ikhwalithi yayo ngaphezu kokufakazelwe. Ukungakhathazeki ngale bhulogi, futhi angizikhathazi nangokuphawula
Ukulandela isibonelo sommese, engingangabazi ukuthi uyingozi ukudlula mina, angazi ukuthi ngiwusebenzisa kanjani. Okungasho ukuthi uzobulala umuntu.
Engingakucabangi ukuthi imininingwane ngendlela efanelekile yokubulala umuntu ngommese yanikezwa wonke umuntu, futhi yilokho okwenziwayo uma kushicilelwa kwi-inthanethi.
Ngicabanga ukuthi noma ngubani okufundise ukusebenzisa ummese wenze njalo ngoba ubenesiqiniseko sokuthi uzosebenzisa lolo lwazi ngokuzibophezela futhi ubungeke ugwaze umuntu wokuqala omthole emgwaqweni.
Inkinga ukugxila kwendatshana, njengoba abasebenzisi abaningi bevezile, ayigcini ngokunikezela umugqa owodwa wokuthi ungakugwema kanjani ukuhlaselwa, kepha futhi ivumela ukweba isignali kumakhelwane.
Kunjengokungathi ngilimale imoto noma ithathiwe, kanti ngenkathi inkinga yami isalungiswa ngintshontsha imoto kamakhelwane. Ingqikithi, ngoba uyisiphukuphuku futhi akazange abeke i-alamu kuso, noma ilokhi ephephe kakhudlwana, kuhle ukuthi ngiyintshontshile, uyifanele!
Ngicabanga ukuthi ngokuziphatha lokhu okuthunyelwe akunazizathu futhi kufanele kuguqulwe noma kususwe.
Udaba lokuthi lungaxazululwa kanjani kufanele lufakwe kokuthunyelwe, enkambweni yokugenca engiyenzile: «Uma ngikufundisa ukuthi ungaluphula kanjani uhlelo, lokho kungaba yicala, kepha uma futhi ngifundisa ukwephula ngifundisa ukuthi uzivikele, yilokho okukubiza ngokuthi ukuphepha kohlelo futhi akujeziswa ngumthetho
Lokho kubonakala kulungile kimi, futhi kungasiza ukukhombisa ukuthi ungayifaka kanjani futhi uyilungiselele kanjani i-WPA kahle.
Impikiswano yayicacile, izibonelo ezibekiwe zokusetshenziswa kwalolu hlelo okushiwo yilokho okungahambi kahle, elav, futhi akukho sizatho sokuzivikela ngalokho.
Kufanele ube nesibindi, akusho ukuthi "kufanele uyibuke ohlangothini oluhle", ukwethulwa kwalolo hlelo nalesi sihloko akulungile.
Ngiyabonga elav inhloso yokuthunyelwe kuhle kodwa njengoba abaningi bekholelwa okungcono kakhulu ngoba baqala ukugxeka esikhundleni sokufaka isandla futhi noma ngubani onganeliseki ngalolu hlobo lwezinhlelo okungcono ukuthi angalulandi, isikhathi, sengathi bonke bangcwele
pufff awukwazanga ukubeka ifayili kwenye indawo efana ne-mega ngoba i-4shared ingicela ukuthi ngibhalise ukulanda lelo fayela
ngabe i386 kuphela ???
Kungcono ukuthatha izifundo kule ndatshana:
1. Ungasebenzisi ukubethela kwe-WEP (ngisho nezingane ziyayigqekeza)
Sebenzisa i-WPA, kepha uma i-router yakho inikwe amandla i-WPS usengozini.
3.Sebenzisa amakhodi amade afaka izinhlamvu, izinombolo nezimpawu, ukugwema ukuhlaselwa ngezichazamazwi.
4. Uma kungenzeka sebenzisa isihlungi se-MAC
5. Shintsha iphasiwedi ngezikhathi ezithile.
abantu abalula kakhulu, abangakuthandi okuthunyelwe noma indlela okushicilelwa ngayo okungcono hamba ... imikhonzo
Hahahaha Iyiphi indlela yokubhekana nemibono yabafundi: - /
Angiboni ukuthi iyini inkinga ekushicileleni ukufakwa kwamathuluzi (yebo, amaScript Kiddies abawabiza) alolu hlobo, ngaphezu kwakho konke kufana ne-aircrack-ng suite, leyo okulula ukuyisebenzisa kunabanye hhayi ukususa Ziyinto efanayo, lezi zinhlobo zamathuluzi akufanele zenziwe amademoni, ngoba lokho ngamunye akwenzayo ngamathuluzi kuhlukile.
Njengoba sike saxoxa kule bhulogi ukuthi kungenzeka ukuthi ibutho le-gringo lifake imibala kwi-GNU / Linux kuma-drones abo adumile.
Ngokubona kwami ​​akudingeki uthembele kakhulu ekuhlungeni i-MAC ngoba ukwenza i-Layer 2 Spoof empeleni kulula (isb. I-macchanger) futhi umhlaseli angasebenzisa i-airodump-ng ukubona ukuthi yimaphi amakheli e-MAC ahlobene nendawo yokufinyelela.
Kimi okuhle kungaba:
1.WPA / WPA2 (Ngaphandle kwe-WPS)
2. Iphasiwedi eqinile ukugwema ukuhlaselwa kwesichazamazwi
3. Shintsha iphasiwedi njalo ukuze ugweme ukuhlaselwa ngamandla.
Ngine-Linux Mint Olivia (inguqulo ye-Kde).
Lapho ukuyifaka kudala iphutha ……… noma yisiphi isisombululo?
Ngiyabonga mfowethu, kungisizile kakhulu. Mayelana
arepa cha kusho
sawubona nginenkinga ngine-lanpro lp5420g router anginalo igama lomsebenzisi noma i-pass ngitshelwe engikufakile futhi ngidinga ukuthola ukuthi bangangisiza kanjani ngine-linuxmint13
Phendula ku-arepa nohay
I-Samba: I-Standalone Server ku-Debian